Ethnic Nationalities Voice တိုင်းရင်းသားအသံ: ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်ဆိုတာအဓိကရုဏ်းကိုဆိုလိုတာလား? Rangoon Institute of Technology, Does it mean R-I-O-T?
ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်ဆိုတာအဓိကရုဏ်းကိုဆိုလိုတာလား? Rangoon Institute of Technology, Does it mean R-I-O-T?
I visited former RIT( Rangoon Institute of Technology) in Burma in July 2009.
It was Tuesday..but the university was totally deserted...and ruined...Onlyalecture was going on with few students at one classroom (1-3/16).
It was the sad reflection of how our education system in Burma is badly neglected today...
I took some photo and video clips..to share with all ex-RITians..
ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဟောင်းများပြန်လည်ဆုံဆည်းပွဲ (၂၀၀၇ ခုနှစ်၊စင်္ကာပူ)
မှော်ဘီအခြေစိုက်တပ်ရင်း ၉၁ နဲ.လုံခြုံချထားသည့်တပ်ေ...
မှော်ဘီအခြေစိုက်ခလရ တပ်ရင်း ၉၁ တစ်ခုလုံးသန်းရွှေအာဏ...
မာတ်ခ်ျလ ၂၅ ရက်နေ.မှာလူထုအုံကြွမှုအစားငလျင်အုံကြွမ...
သျှမ်းတပ်နဲ.ဗမာတပ် ၅ ရက်ကြာတိုက်ပွဲအခြေအနေ
Condolence and encouragement Letter from Ethnic Na...
မာတ်ခ်ျလ (၂၅) ရက်နေ.၊ပြည်သူ.ဒေါသပေါက်ကွဲနေ. March ...
(၃၁)ခေါက်မြောက်ပြေးဆွဲခဲ့ပြီးဖြစ်သော AN-148 လေယာဉ်...
Walk Like An Egyptian အီဂျစ်တစ်ယောက်လိုလမ်းလျှောက်...
တော်လှန်ရေး (သီးချင်း) John Lennon ရေးစပ်ပြီး The...
+++နေရာ+++ ဟေ့ လူ! တဆိတ်လောက် ကူညီဗျာ ...